अब नेपालका प्रत्येक वडामा फ्री वाइफाइ उपलब्ध हुने ! वाइफाइ बारे यस्तो भन्छ नेपाल टेलिकम – – Life Nepali
अब नेपालका प्रत्येक वडामा फ्री वाइफाइ उपलब्ध हुने ! वाइफाइ बारे यस्तो भन्छ नेपाल टेलिकम –
12 months ago Life Nepali
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले देशका हरेक वडामा वाईफाई उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा वडामा रहेका सरकारी तथा अन्य संस्थागत कार्यालयलाई लक्षित गर्दै वाईफाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रममै समेटेर वाईफाई सुविधा विस्तार गर्ने काम अगाडि बढाइएको उनले बताए। वडामा रहेका टेलिकमको बीटीएस टावरमार्फत विशेष ‘डिभाइस’को प्रयोग गरेर वाईफाई सुविधा उपलब्ध गराउने टेलिकमको योजना छ ।
टेलिकमलाई उपलब्ध आठ सय र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर वाईफाई उपलब्ध गराइने कम्पनीका इन्जिनियर अमृत नेपालले जानकारी दिए। कम्पनीले वाईफाईसँगै फिक्स्ड टेलिफोन सेवा पनि समाहित गरेर उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । संस्थागत प्रयोगकर्तालाई फिक्स्ड टेलिफोन उत्तिकै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यससँगै त्यो सुविधा पनि हुनेछ, उनले भने ।
Previous रुसले कोरोनाभाइरसको पहिलो भ्याक्सिन बनाएको हो त ? यस्तो भन्छ्न बैज्ञानिक –
Next डब्ल्युएचओ ले कोरोनाबारे यस्तो खुशीको खबर सार्वजनिक गर्यो !